आमिर खान अभिनयबाट बिश्राम लिदै ! « Ramailo छ
आमिर खान अभिनयबाट बिश्राम लिदै !
बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खान अभिनित फिल्म ‘गजनी’, ‘थ्री इडिएटस’, ‘पिके’, ‘दंगल’ जस्ता फिल्मलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका थिए । यीनै फिल्मले गर्दा आमिर खान प्रति निकै आशावादी भएका थिए दर्शक । तर उनको ‘ठग्स अफ हिदोस्तान’ले दर्शक मात्र होइन आमिर आफु पनि निराश भएका छन् ।
दिपावलीको अवसर पारेर रिलिज गरिएको आमिर अभिनित फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ बक्स अफिसमा असफल सावित भैसकेको छ । फिल्मले सुरुकोे दिनमा ५२ करोड कमाएर राम्रो ओपनिङ गरेको थियो तर दोस्रो दिन त्यो रेकर्ड कायम गर्न सकेन । समिक्षक र दर्शकको नकारात्मक प्रतिक्रियाले आमिरको फिल्मको व्यापार मात्र खस्केको छैन उनको करियरमा समेत ठेस पुगेको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार आमिरले पहिला नै फिल्ममा केहि गडबड छ भन्ने महसुस गरिसकेका थिए, त्यसैले उनले फिल्मको धेरै ठुलो प्रमोशन पनि गरेनन् ।
आमिर खान अभिनयमा ब्रेक लिदै छन् भन्ने खबरले भारतीय मिडिया छाएको छ । अब उनी अभिनयमा भन्दा पनि फिल्म निर्माणमा केन्द्रित रहनेछन् । उनी छिट्टै नै आफनो ड्रीम प्रोजेक्ट ‘महाभारत’ को सुटिङ सुरु गर्दैछन् । यो फिल्ममा आमिर निर्माताको रुपमा रहने छन् । फिल्ममा उनको अभिनय हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा अन्यौल रहेको छ ।